१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:५९
ओलीले नेकपा फुटाइसकेका छन्। तर, पार्टी र संसदीय दलमा ४०% नपुगेका कारण घोषणा गर्न भने सकेका छैनन्। जनताको जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका विरुद्ध उभिएका ओलीको कदमले अब नेकपा एकै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।
नेकपाभित्र जारी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जारी पार्टी स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली असफल भएको ठहरसहित उनको राजीनामा मागेपछि नेकपाको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नभए देश र नेकपा दुवै डुब्ने दावी गर्दै आएका छन्। तर, घटनाक्रमले ओलीको नेतृत्व रहिरहे नेकपा र देश नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।
२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली सरकार इतिहासमै असफल सावित भएको छ। अढाइ वर्षको अवधिमा सरकारले जे नगर्नुपर्थ्यो, ती सबै चीज गरिएका छन्, जे गर्नुपर्थ्यो, ती अधिकांश कुरा गरिएका छैनन्। निर्वाचन घोषणापत्र आश्वासनको पोकोमा परिणत भएको छ। जनताको आशा र विश्वासमाथि चिसो पानी खन्याइएको छ। इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको वामपन्थी सरकार राजावादीहरुको प्रतिक्रियावादी सरकारभन्दा पनि प्रतिगामी मेसिनरीमा फेरिएको छ।
वाइडबडी काण्डमा अर्बौंको भ्रष्टाचारमा मुछिएको ओली सरकारको भ्रष्टाचार गणना गर्नै नसकिने गरी चुलिएको छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र कमिसनमा मुछिएका नेताहरु ओलीका प्रियपात्र बनेका छन्। ओली उनीहरुको लाचार छायाँमा परिणत भएका छन्। अदालत र अख्तियारमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई सुनपानीले चोख्याउने ओलीका व्यवहारले लोकतन्त्र नै लज्जित भएको छ। यस्ता हर्कत रोकिनुभन्दा एकपछि अर्को बिस्तार हुँदै गइरहेका छन्।
पार्टी विभाजनका लागि ओलीले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कलंकको टीका थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि ओली यसबाट पछि त हटे। तर, फेरि पार्टी फुटाउने अध्यादेश नल्याउलान् भन्न सकिन्न। आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरी हठात् संसद अधिवेशन अन्त्यको ओली निर्णय पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध थियो। सरकारका गतिविधिहरु लोकतान्त्रिक प्रणाली र समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना विपरित छन्।
अढाइ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैभन्दा बढी आलोचित भइन्। पार्टीको गुटीय भूमिकामा राष्ट्रपतिलाई तान्ने ओली सरकारको हर्कतले सम्मानित राष्ट्रपति संस्था नै बद्नामित हुन पुगेको छ। जुन संस्था गणतन्त्रको विश्वास हो, आस्थाको केन्द्र हो, त्यही संस्थाको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। अहिले शितल निवास राष्ट्रपति कार्यालय होइन, ओली समूहको कार्यालयका रुपमा परिणत भएको छ। राष्ट्रपतिको जीवनशैली र संस्कार पनि कम विवादित रहेन। यी सबै कुरामा सरकारले लाचारी र सदासयता पनि कम जिम्मेवार छैन।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीको निर्णय प्रधान हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका होइनन्, संसदबाट चुनिएका हुन्। सांसदका रुपमा मात्र उनी संसदमा नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएका हुन्। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानको परिकल्पनाले नै प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली यो कुरा मान्न तयार छैनन्। अझ कम्युनिस्ट पार्टीका दृष्टिमा त सरकार प्रगतिशील रुपान्तरणको एउटा शासन मात्र हो, ऊ पार्टीभन्दा माथि हुनै सक्दैन।
तर, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णय नमान्ने, विधि प्रक्रिया नमान्ने, आफ्नो कुरा ठीक अरु सबै गलत, म ब्रह्मज्ञानी, बाँकी सबै निरक्षर, म नै राज्य, म नै कानून, म नै अदालतजस्तो गरी प्रस्तुत भएका छन्, जुन कुरा आजको लोकतान्त्रिक दुनियाँमा सुहाउने विषय होइन। ओलीको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघिसकेको छ। अब पनि उनलाई सत्तामा कायमै राख्ने हो भने नेकपा त सकिन्छ नै, नेपालको भविष्य पनि संकटमा पर्नेछ। बेला न कुबेला ओलीद्वारा प्रस्तुत विचारले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिको पूर्वसन्ध्यामा भएको संकेत गर्दछ।
नेकपा फुटाउन पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले आफ्नै निर्देशनमा नेकपा (एमाले) दर्ता गरिसकेका छन्। वैचारिक र भावनात्मक दृष्टिले ओलीले नेकपा फुटाइसकेका छन्। तर, पार्टी र संसदीय दलमा ४०% नपुगेका कारण घोषणा गर्न भने सकेका छैनन्। जनताको जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका विरुद्ध उभिएका ओलीको कदमले अब नेकपा एकै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।
आज नेकपा जसरी अनिर्णय बन्दी बनेको छ, यही परिस्थिति कायमै रहेमा पार्टी विभाजन नभए पनि आउने चुनावमा नेकपाले दर्दानाक परिणामको सामना गर्नुपर्नेछ। भीडतन्त्रले क्रान्ति त गर्दैन नै, निर्वाचनमा पनि त्यसले कुनै नतिजा हासिल गर्न सक्दैन। तसर्थ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो भने ओलीलाई बिदा गर्नुको बिकल्प छैन, अन्यथा नेकपा र देशले भयावह परिणाम बेहोर्नुपर्नेछ।
‘पूँजीवादले हामीलाई मार्दैछ, हामीले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ’